LibreOffice UI - master/swext/mediawiki/help — Burmese @ TDF Weblate - LibreOffice
Translated strings — 355 words
Strings needing action — 1,112 words
Not translated strings — 500 words
Strings marked for edit — 612 words
Strings needing action without suggestions — 1,112 words
Strings with any failing checks — 198 words
Failed check: Trailing space — 142 words
Failed check: XML markup — 49 words
LibreOffice UI - master / swext/mediawiki/help — Burmese
Optionally enable “Save password” to save the password between sessions. A master password is used to maintain access to all saved passwords. Choose <item type="menuitem">Tools - Options - %PRODUCTNAME - Security</item> to enable the master password. “Save password” is unavailable when the master password is not enabled.
Burmese 45 characters edited
အပိုင်းများကြားရှိ စကားဝှက်သိမ်းဆည်းမှုပြုရန် "စကားဝှက်သိမ်းဆည်းပါ" ကိုလုပ်ဆောင်မှုပြုပါ။ သိမ်းဆည်းထားသည့် စကားဝှက်များအားလုံးကို ရယူထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ပင်မစကားဝှက်တစ်ခုအသုံးပြုပါ။ ပင်မစကားဝှက်တစ်ခုအသုံးပြု နိုင်ရန် <အချက်အလက်အမျိုးအစား="အချက်အလက်မီနူး <item type="menuitem">ကိရိယာများ - ရွေးပိုင်ခွင့်များ - %PRODUCTNAME - လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ</အချက်အလက်item>ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပင်မစကားဝှက်အသုံးမပြုသောအခါ"စကားဝှက်သိမ်းဆည်းပါ"ကို အသုံးမပြုပါနှင့်။
Choose <item type="menuitem">File - Send - To MediaWiki</item>.
Burmese 86 characters edited
<အချက်အလက်အမျိုးအစား="အချက်အလက်မီနူး">ဖိုင် - ပေးပို့ပါ - မီဒီယာဝီကီသို့ </အချက်အလက်> ရွေးချယ်ပါ။Escolla <item type="menuitem">Ficheiro - Enviar - A MediaWiki</item>.
OpenaWriter document, and choose <item type="menuitem">Tools - Options - Internet - MediaWiki</item>.
Burmese 138 characters edited
မှတ်တမ်းမှတ်ရာရေးသားသူကိုဖွင့်ပြီး <အချက်အလက်အမျိုးအစား="အချက်အလက်မီနူး">ကိရိယာများ - ရွေးပိုင်ခွင့်များ - အင်တာနက် - မီဒီယာဝီကီ</အချက်အလက်>ကိုရွေးချယ်ပါ။Abra un documento do Writereescolla <item type="menuitem">Ferramentas - Opcións - Internet - MediaWiki</item>.
Note: If you connect to the web usingaproxy server, enter the proxy information to <item type="menuitem">Tools - Options - Internet - Proxy</item>, and restart the software.
Burmese 230 characters edited
မှတ်ချက်- ပရောက်ဇီဆာဗာအသုံးပြုထားသည့် ကွန်ယက်သို့ သင်ချိတ်ဆက်လိုလျှင် ပရောက်ဇီနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို<အချက်အလက်အမျိုးအစား="အချက်အလက်မီနူး">ကိရိယာများ - ရွေးပိုင်ခွင့်များ - အင်တာနက် - ပရောက်ဇီ</အချက်အလက်>တွင်ရယူပြီး ဆော့ဖ်ဝဲပြန်လည်စတင်ပါ။Nota: Se se conecta á webatravés dun servidor proxy, introduzaainformación do proxy en <item type="menuitem">Ferramentas - Opcións - Internet - Proxy</item>ereinicie o programa.
Note: You can store your user name and password for all respective dialogs inside %PRODUCTNAME. The password will be stored inasecure way, where access is maintained byamaster password. To enable the master password, choose <item type="menuitem">Tools - Options - %PRODUCTNAME - Security</item>.
Burmese 348 characters edited
မှတ်ချက်- %PRODUCTNAMEအတွင်းရှိ ဒိုင်ယာလော့ခ်များအတွက် သင်၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက် သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ပင်မစကားဝှက်တစ်ခုအနေဖြင့် ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန် လုံခြုံမှုရှိသည့်နည်းလမ်းဖြင့် စကားဝှက်အား သိမ်းဆည်းမှုပြုလိမ့်မည်။ ပင်မစကားဝှက်အား အသုံးပြု နိုင်ရန် <အချက်အလက်အမျိုးအစား="အချက်အလက်မီနူး’’>ကိရိယာများ - ရွေးပိုင်ခွင့်များ - %PRODUCTNAME - လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ</အချက်အလက်> ရွေးချယ်ပါ။Nota: Pode almacenar o seu nome de usuarioecontrasinal para todos os diálogos respectivos dentro do %PRODUCTNAME. O contrasinal almacénase de maneira seguraeo acceso mantense cun contrasinal principal. Para activar o contrasinal principal escolla <item type="menuitem">Ferramentas - Opcións - %PRODUCTNAME - Seguranza</item>.
<ahelp hid=".">Choose <item type="menuitem">File - Send - To MediaWiki</item> to upload the current Writer document toaMediaWiki server.</ahelp>
Burmese 189 characters edited
<ahelp hid="."> ရွေးချယ်ပါ။ မီဒီယာဝီကီဆာဗာသို့ လက်ရှိမှတ်တမ်းမှတ်ရာရေးသားသူ၏ အချက်အလက်များလွှဲပြောင်းပေးပို့ရန် <အချက်အလက်အမျိုးအစား="အချက်အလက်မီနူး">ဖိုင် - ပေးပို့ပါ - မီဒီယာဝီကီသို့</အချက်အလက်> ကိုရွေးချယ်ပါ။ Escolla <item type="menuitem">Ficheiro - Enviar - A MediaWiki</item> para enviar o documento actual do Writeraun servidor de MediaWiki.</ahelp>
is:translated AND language:my Add
49% 44 355 2,510
22% 20 612 3,764
12% 11 198 1,425
Nov. 13, 2020, 3:09 p.m.